ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး: သူနဲ့သာဆိုလျှင်.(.သို့) သူရှိနေလို့သာ
ဒီနေ့ မီးပျက်များလှသည် နေ့လည်လဲပျက် ညလဲပျက် တခါ လာလိုက် ပျက်လိုက်နဲ့ အစိုးမရပါလား ကိုရွှေမီးရယ်..။ ည အချိန်မှာ ပုံမှန်အပျက်နည်းခဲ့သည် ဒီနေ့တော့ မီးပျက်မြဲပျက်ဆဲမို့ အခန်းထဲမှ အပြင်ထွက်ပြီး လေညှင်းခံနေမိသည်။ ဗာရာဏသီ တ၀ိုက် မှောင်နဲ့မဲမဲ လရောင်က မရှိမို့ အပြင်လိုက်ကြည့်မိသည် မှောင်မဲမဲချည်းသာ။ တခါတရံ တိဘက်တက္ကသိုလ်ဆီမှ ထိန်ထိန်လင်းလို့နေသောမီး ယခုတော့ မှောင်မဲလို့ပါလား။ မိမိအိမ်မှာတော့ ဟဲ ဟဲ လင်းမြဲလင်းဆဲ လင်းလျှက်ပါလား မိမိအိမ်ရှင် အပေါ်ထပ်မှာလည်း မီးများလင်းလျှက် မိမိအခန်းအနီးတ၀ိုက် လှည့်လည်ကြည့်မိသည်။ မှောင်မဲလို့နေကြသည်။ ကိုလာရဲ့မြည်ဟီးသံတို့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျှက် တခန်းကျော်မှ ကုလားမိသားစု ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် ကလေးသည် ပူလောင်သည့်ဒဏ်ကြောင့် ငိုသံမှတပါး ဗာရာဏသီတ၀ိုက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျှက်ရှိသည်။ အော..ငါ့အိမ်မီးထိန်လို့ပါလား။ ဟိုဘက်ခန်းက မီးမှိန်မှိန် ဒီအခန်းက မီးမှိန်မှိန် ဆီမီးထိန်ထိန်လင်းပါလို့ ဘိုးသီတို့အိမ်။ လို့ ဆိုရချေမည် နှစ်စဉ်တော့ မီးပျက်သည့်ဒဏ်အလူးလဲခံစားရသည် ဒီနှစ်တော့ (ဗီယက်နမ်ဆရာလေး၏ကောင်းမှုကြောင့်) အမှောင်ဆိုသည်မှာမရှိတော့။ ကျေးဇူးပဲ ဗီယက်နမ်ဆရာလေးရေ..။မနေ့က ဖုန်းလာခဲ့သည် သူမိသားစုတွေနဲ့ သူ့နိုင်ငံမှာရောက်ပေမဲ့ မပျော်ပါဘူးတဲ့..။နေခဲ့ဘူးတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ သူငယ်ချင်းများကိုသတိရနေမိသည်တဲ့။ ဒီနေ့လဲ အင်တာနက်မှစာလာသေးသည်. အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အရမ်းပူနေပြီလား ကိုလာနှင့် အင်ဗာတာစသည်တို့ အဆင်ပြေရဲ့လား..မြန်မာပြည်ကို ရောက်နိုင်အောင်သူကြိုးစားမည်ဖြစ်ကြောင်း မင်းလဲ ကျမ္မာရေးဂရုစိုက်ပါတဲ့..စသည်စည်ဖြင့် အင်တာနက်စာမျက်နှာ မှာတွေ့လိုက်တော့ တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့သည်။ ဒီနေ့ မီးကလဲ ပျက်လိုက်သာ ယခု post ရေးနိုင်ချိန်ထိဖြစ်၏။ ယခု မီးပျက်နေချိန်မှာ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအဖြစ် ဗီယက်နမ်ဆရာလေးကို ပြေးမြင်မိ၏။ ဒီနေ့ စာကလဲလာသည်။ မနေ့က ဖုန်းလာသည်။ တိုက်ဆိုက်မှုတို့သည် တခါတရံမမျှော်လင့်ပဲ ဖြစ်တတ်စမြဲဖြစ်၏။ ဒို့တတွေ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ ဖြစ်သည့်အလျှောက် တယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေ ကူညီလို့ မောင်နှစ်မစိတ်ဓါတ်လေးတွေနဲ့ ကူညီပေးခဲ့ဘူးသည့်ကျေးဇူးတွေ တဦးမေတ္တာ တဦးစေတနာတွေကြောင့် သာသနာ့ ဆွေတော်မျိုးတော်တွေဖြစ်သည်အားလျှော်စွာ စေတနာထားလို့ ကူညီကာစောင့်ရှောက်ခဲ့ရသည်။ တခါ ဆောင်းတွင်းကာလ မိမိတို့အိမ်တွင်း မီးပြဿနာကြုံခဲ့ရသည်။ မိမိတို့ မြန်မာဘုန်းကြီး ဗီယက်နမ် သီလရှင် တိဘက်ဘုန်းကြီးတို့တဖက် ကုလားမိသားစု (အိမ်ငှား)တဖက် စကားများဖြစ်ကြသေး၏။ အမှန်စင်စစ် မီးသည် ကုလားမိသားစု အရမ်းသုံးစွဲခြင်းကြောင့် မိမိတို့အခဏ်း မီးမရဖြစ်တတ်သည်မို့ ပြဿနာဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါက အိမ်ရှင်သည် မိမိတို့ဘက်က ရပ်တည်ခဲ့သည်။ မိမိတို့ နေလာခဲ့သည်မှာ ၄ နှစ်တာရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း တခါမှမီးပြဿနာမဖြစ်ဘူးကြောင်း တိဘက် နှင့်မိမိတို့ ၀ိုင်းပြောခဲ့သည်။ လော်ကယ်မို့ သူအနိုင်ရယူလိုသည် သို့သော် သူအမှားမို့ သူမပြောပဲ ရှောင်ထွက်သွားသည်။ မီးပြဿနာ ခုတော့ မဖြစ်တော့။ အိမ်ရှင်မှ သူ့ကို ပြောထား၏။ တိဘက် မြန်မာတို့သည် နေတာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဟူ၏။ မင်း အခြားအိမ်မှာ မီးအသုံးများချင်းကြောင့် ၃ ခါ နှင်ထုတ်ခံရသည်ကိုထောက်ပြလိုက်တော့၏။ မင်း ပြဿနာဖြစ်ရင် မင်းပဲသွားရမှာဟူ၏။ ဒီနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် မြန်မာပြည်ကဲ့သို့ထူးမခြားနားဖြစ်၏။ နိုင်ငံခြားဆိုသည်မှာ အိန္ဒိယမှအပ မီးမပြတ်ကြချေ။ မိမိ စင်္ကာပူ မလေး ထိုင်း ရောက်စဉ် မိမိနေထိုင်ရာ အိန္ဒိယလိုအထင်နှင့် မီးပြတ်လား မကြာမကြာမေးဘူး၏။ ဟော ပြောရင်းဆိုရင်း သူလာပြီ မီး။ မီးလာသည်နှင့် အခန်းကိုယ်စီထံမှ ညာသံပေးလို့ ကိုလာတို့သည် မြည်နေတော့၏။ မိမိလည်း ကိုလာလေးနှင့်ဆိုတော့လဲ အပူဒဏ်ကိုအံတုလျှက် သို့သော် အအေးဒဏ်ကိုတော့ကာကွယ်ပေး၏။ သို့သော် မီတာခသည်ကား...။
Posted by ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး at 12:37 PM